‘इन्डियन आइडलमा झुटो तारिफ गर्न लगाइन्छ’ - The Public Today
‘इन्डियन आइडलमा झुटो तारिफ गर्न लगाइन्छ’
by द पब्लिक टुडे
गौशाला, जेठ १८ गते । भारतीय टेलिभिजनको चर्चित गायन रियालिटी शो ‘इन्डियन आइडल’मा टीआरपीका लागि झुटो तारिफ गर्न लगाइने खुलासा गायिका सुनिधी चौहानले गरेकी छिन् । सुनिधी यो शोको पाँचौ र छैटौ श्रृङ्खलामा निर्णायक थिइन् ।
उनले, शोका मेकर्सले चाहेको कुरा आफूले गर्न नसक्ने भएका कारण शो छाडेको उल्लेख गरेकी छिन् । उनले, निर्णायकको सोचलाई पर राखेर प्रतिस्पर्धीहरुको झुटो तारिफ गर्न लगाइने पनि बताएकी छिन् ।
सुनिधीले भनिन्– ‘शोमा जती पनि विवादस्पद कुराहरु आउँछन्, त्यो दर्शकको ध्यान खिच्न मात्र हो । शोमा सहभागी प्रतिस्पर्धीहरुले निर्णायकबाट झुटो तारिफ पाउने गर्छन् । यसलेगर्दा, उनीहरु आफ्नो प्रतिभा नै विर्सने अवस्थामा पुग्छन् ।’
सुनिधीले यो शोले गायन क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेहरुका लागि ठूलो मञ्च प्रदान गरेको बताउँदै भनिन्–‘तर, प्रतियोगीहरु टीभीमा आफ्नो सफलताको कथा मात्र सुन्न थाल्छन् । यसलेगर्दा, उनीहरुमा केही गरेर देखाउने चाहना नै सकिन थाल्छ ।’
केही प्रतिभाहरुले मिहिनेत गरेपनि निकै चाडो पाएको सफलताले उनीहरुको दिमागमा ठूलो असर गर्ने सुनिधीको भनाई छ । उनले, यसमा प्रतिस्पर्धीहरुको गल्ती नभएको भन्दै सबैकुरा टीआरपीको खेल रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । एजेन्सी
´द पब्लिक टुडे अनलाईन´ पब्लिक टुडे पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा सञ्चालित छ । हामी यहाँहरुको अमूल्य सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । इमेल:- [email protected]
चुरे दिवसमा दिलिप प्रतिष्ठानद्वारा अन्तरक्रिया : चुरे विषयमा गम्भिर बहस
जर्मनीको आत्मघाती गोलबाट फ्रान्स विजयी
इजरायलद्वारा गाजा क्षेत्रमा पुनः आक्रमण
अस्पतालबाट नेता खनालको सन्देश : ‘पार्टी मिलाउनुस् कमरेड…’
बाढीपीडितको उद्धार गर्न अखिल र युवा सङ्घ टोली परिचालन
उद्धार र राहतको काममा लाग्न सरकारलाई प्रतिपक्ष दलको आग्रह
महोत्तरी : दाजुको कुटपिटबाट भाइको मृत्यु
महोत्तरीमा डाँकाको गोली प्रहारबाट एक महिला गम्भीर
दिलिपको सम्झनामा चुरे बाटिका बनाइँदै, चुरे संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास
बर्दिबास : उपभोक्तालाई कुहिएको मासु !
प्रहरीद्वारा एकैदिन ठुलो मात्रामा कच्चा पदार्थ बरामद